Ndị dike Africa: Bellydancer, Popstar, Onye Na-emepụta Ejiji, Otu Njem Nleta Ndị njem, na Onye na-egwu mmiri
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị dike Africa: Bellydancer, Popstar, Onye Na-emepụta Ejiji, Otu Njem Nleta Ndị njem, na Onye na-egwu mmiri
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ejiji • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ na -agbasa na Jordan • Akụkọ kacha ọhụrụ na Libya • News • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ dị iche iche
onye na-egwu mmiri
Ndị njem njem njem n'Africa nọ n'ihu n'usoro ebe nsogbu a na-apụta.
AKW ,KWỌ, ndị kasị ibu njem ụlọ ọrụ mkpakọrịta mgbe niile na-ekwu na njem na-azụ ahịa na ndị enyi. Njem nleta na-eme ka anyị dịrị n'otu, ọ bụghị nkewa. Ndi Africa mara nke a.
Afrịka na-adị n’otu n’ịchọ ka ndị ọbịa nọrọ n’ụlọ, ya mere enwere ike ịnabata ndị njem si mba ụwa niile na kọntinent ha mara mma. Afrika enweghi ike ichere iji obi uto nabata ndi obia.
Iji mezuo nke a, Africa nakweere nkwanye site n'aka ndị UNWTO na-asị: “Site n'ịnọ n'ụlọ taa, anyị pụrụ ime echi.”
Zimbabwe bipụtara vidio na-aga ebe akpọrọ “Na mpempe ọkụ,” mba na mpaghara ụwa niile nwere ike ịnya isi na ya. Zimbabwe enweghi ike ichere ịnabata ndi ọbịa na ebe ha si bia.
Otu onye na-agba egwu afọ na South Africa na-arụ ọrụ n'ịntanetị, onye na-emepụta ejiji na Libya gbanwere mmepụta iji mee ka Africa nwee ahụike, na African Tourism Board tinyere ndị otu nrọ zuru ụwa ọnụ ọnụ nke na-arụ ọrụ n'atụghị egwu n'azụ ihe ahụ iji chekwaa njem na-eme ego na kọntinent nke kọntinent ahụ.
Mama Africa nwere ọtụtụ ndị dike a ga-edepụta ma kpọọ aha ha.
Africa na-abia dika kọntinent nke na-eche nje virus na-egbu egbu aka na heroism site na ndịda ruo n'ebe ugwu na site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ nke kọntinent ahụ. N'ime ndị dike a, ọtụtụ ndị njem na njem nleta.
N'okpuru nduzi nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa na onye bụbu Secretary General nke UNWTO Dr. Taleb Rifai na Alain St. Ange, onye bụbu minista maka njem nleta na Seychelles, e guzobere otu ndị ọrụ ga-eguzo n'azụ ụlọ ọrụ njem na njem. Enweghi mmasi na mba na ndi ozo ha na mpaghara uwa dum ka hazie iji chebe otu n'ime ndi kacha enweta ego n'Africa - njem na njem nleta.
Rifai weghaara otu ndị otu nrọ maka ndị ọrụ Africa ya. Ha gụnyere Gloria Guevara, onye isi oche nke WTTC, ndị World Travel na Tourism Council; ndị Hon. Edmund Bartlett, Mịnịsta njem na Jamaica na onye isi Ililọ Ọrụ Njegharị Njegharị Globalwa na Centerlọ Ọrụ Ndozi Nsogbu; Louis D'Amore, onye nchoputa nke Institutelọ Ọrụ Mba Nile Maka Udo Site na njem; Prọfesọ Geoffrey Lipman, Onye isi ala nke ICTP na Anyanwụ; onye bụbu minista njem nleta maka Egypt Hisham Zazou; ndị Hon. Onye ode akwukwo njem nleta na Kenya Najib Balala; Dho Young-shim isi nke STEP na South Korea; na Linda L. Nxumalo, Eswatini Tourism Authority; n'etiti ndị isi njem njem ndị ọzọ dị mkpa si n'Africa niile. Ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya njem nlegharị anya nke Africa na ndị otu si mba karịrị 40 na-akwado ha. Nkwekọrịta nkwekọrịta dị na pipeline na ọtụtụ mba na mpaghara dị iche iche na mpaghara ọha na ndị nkịtị.
African Tourism chọrọ nkwado nke ụwa, nke a nwere ike ịbụ nnukwu azụmahịa.
Africa ka bu otu n'ime ebe kachasi nma n'uwa nile tinye ego na oge nsogbu. Na Ndị njem nlegharị anya nke Africa dị njikere ikwado okwu mmeghe iji nwee mkparịta ụka na-aga.
E hiwere African Tourism Board na 2018 site n'aka Juergen Steinmetz, Onye mbipụta nke eTurboNews onye ka bu onye isi oche na CMCO nke ATB ugbu a. N'ime otu afọ, ndị Ndị njem nlegharị anya nke Africa etolite na pan African NGO n'okpuru nduzi nke Onye isi oche ha Cuthbert Ncube, onye isi oche Doris Woerfel, COO Simba Mandinyenya, na Onye isi ala Alain St.Ange.
Samaki Mkuu, onye na-ese ihe a na-akpọbu Kenya Kenyan Jess Dunford, nwere jikọtara ya na Jus nke Jabali Afrika iji mepụta abụ COVID-19 iji nyere aka ịgbasa "ozi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji chekwaa ndụ ma gosipụtakwa obi ekele anyị na ndị ọrụ ahụike gburugburu ụwa na-alụ ọgụ na agha agha".
Na mgbakwunye na ndị njem njem njem n'Africa maka ụlọ ọrụ kachasị elu n'ụwa, enwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Akara ejiji Libya agbanweela site na ime akwa akwa na uwe ogwu.
Akpụcha ahụ bụ mgbanwe site na uwe ndị na-adịkarị mma nke ndị na-akwa akwa na-eme
Womenmụ nwanyị isii na-akwa akwa maka ndị dọkịta na ndị nọọsụ na ụlọ ọrụ uwe ejiji nke Fashion House na isi obodo Libya, Tripoli.
Ha nile wepụtawo onwe ha maka ọrụ ahụ, ụfọdụ na-edina n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ha emela uwe nlekọta ahụike 50 ruo ugbu a ma ha na-arụ ọrụ ugbu a na ogbe nke abụọ.
Otu onye nwe ụlọ na Kenya gwara mmadụ iri atọ na anọ ya bi na ha achọghị ịkwụ ụgwọ ụlọ ha maka ọnwa Mach na Eprel n'ihi na ọ ghọtara ọrịa ọrịa coronavirus tinyere ha n'ọnọdụ nsogbu ego.
Michael Munene nwere ụlọ iri abụọ na asatọ na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Nyandarua bụ nke ọ na-ana 28 Kenyan shillings ($ 3,000; £ 30) kwa ọnwa.
O nwekwara ụlọ ahịa isii gbazitere na 5,000 Kenya shillings kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ndị nwe ụlọ ahụ akwụghị ụgwọ ọ bụla, ọ ga-efu ihe karịrị $ 2,000.
Otu onye na-agba egwu afọ na-eme ndị mmadụ ihe n'ịntanetị
Ndị mmadụ na-ezipu ozi Nermine Sfar ka ọ na-eme ihe
Onye na-agba afo na Tunisia Nermine Sfar na-egosi ihe ọ na-eme iji mee ka ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ n'oge mkpọchi na mba North Africa.
Ọ nọ na-egwu egwu na-agba egwu site n'ụlọ ya kwa abalị na ọtụtụ nde mmadụ elele vidio ya na Facebook n'izu gara aga.
Ọ malitere tupu mkpọchi amalite - nke bụ ụbọchị Sọnde, Machị 29, maka ndị Tunisia - agbanyeghị na agbaala ndị mmadụ n'oge ahụ ka ha nọrọ n'ụlọ.
Ọ kpọrọ mkpọsa ya na mgbasa ozi mgbasa ozi: "Nọrọ n'ụlọ ma m ga-agba egwu maka gị."
O yiri ka ọ rụọ ọrụ - na-abụkarị otu narị puku kwuru egwu na mgbede ọ bụla, a na-elele vidiyo site na izu gara aga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde abụọ.
Popstar na-enye ụlọ dị ka ebe iche iche
Hamelmal Abate ghọrọ onye ama ama n’afọ ndị 1990
Otu onye popu nke Etiopia enyela obodo eji eme ihe maka ndị mmadụ na-aga iche iche.
N’ọnwa gara aga, gọọmentị Etiopia nyere iwu ka a kpọpụ onye ọ bụla na-abata n’obodo ahụ n’ụlọ nkwari akụ n’ego nke aka ya ruo ụbọchị iri na anọ.
Zimbabwe Tourism enweghị ike ichere ịlaghachi ndị ọbịa n’obodo ha dị ịtụnanya ma kesaa ozi a na ụwa nke ndị ọbịa.
Africa na-abia onu n’oge nsogbu na oke egwu.
A na-ekwukarị na ọwụwa anyanwụ Africa na ọdịda anyanwụ kacha mma n'ụwa. Eleghi anya ọ bụ n'ihi na Africa dị iche iche, mbara ala jupụtara na dunes na-agagharị agagharị, oke ọhịa, mbara ala mepere emepe sara mbara, na mbara ọzara jupụtara na ụmụ anụmanụ na-ata nri, ọ nweghịkwa ihe dịka ikiri anwụ na-agbada n'ụsọ osimiri ebe okpomọkụ. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ ya kpatara ya, ka mgbede na-abata, kọntinent a dị ebube ga-ahapụ otu ntụgharị okwu na anyanwụ, mgbe chi ọbụbọ na-agagharị na ị gaghị achọ ịpị bọtịnụ ahụ mara mma!
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa chọrọ ka Africa bụrụ otu ebe ụwa na-ahọrọ.